Ra’iisul wasaaraha oo madax kala duwan la kulmay-Sawirro | Baydhabo Online
Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Kheyre oo Soomaaliya ugu qeybgalay shir madaxeedka midowga Afrika ayaa kulan la yeeshey mas’uuliyiin kala duwan oo shirka ka qeybgalaysa.
Mudane Xasan Cali Kheyre, ra’iisul wasaaraha dalka ayaa bartiisa TWITTER-ka ku soo qorey in dowladda Seychelles isku afgarteen in ay saxiixdaan heshiis ku aadan soo wareejinta maxaabiista Soomaaliyeed ee dalkaas ku xiran kuwaas oo loo heysto dambiyo burcad badeednimo ah.
“Waxan ku heshinay dawlada Seychelles in an wada saxiixano heshiis si ay noogu soo wareejiyaan maxabiista Soomaalida ah ee ku xiran wadankooda” ayuu yiri mudane Kheyre.
Ra’iisul wasaaraha ayaa sidoo kale sheegay in uu la kulmay wasiirka arimaha dibadda boqortooyada Sacuudiga Caadil Al-jubeyr ayna ka wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal.
Sidoo kale Ra’iisul wasaaruhu waxaa waxaa uu madaxdii uu la kulmay kamid ahaa madaxweynaha jamhuuriyadda Jabuuti mudane Ismaaciil Cumar Geelle, ayagoo ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dhinac iyo kor u qaadista taageerada Soomaaliya ee Jabuuti.
“Waxaan la kulmay Madaxweynaha Djibouti. Waxaan ka wada-hadalnay xoojinta xiriirka walaaltinnimo iyo kor-u-qaadidda taageerada Soomaaliya,” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha.
Mudane Xasan Cali Kheyre ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sidoo kale magaalada Adis Ababa kulan kula yeeshay dhigiisa dalka Maurituis, waxayna isla gaareen in maxaabiista Soomaalida ah oo wadankaas ku xiran lagu soo wareejiyo Soomaaliya.
“Waxaan sidoo kale RW Maurituis @pjugnauth isla gaarnay in ay nagu soo wareejiyan maxabiista Soomaalida ah ee ku xiran wadankiisa,” .
Sidoo kale, ra’iisul wasaaraha Soomaaliya waxaa uu kulan la yeeshay madaxweynaha dalka Uganda.